Waxyabaha aadan ka ogayn qoraaga Sucuudiga - iftineducation.com
Waxyabaha aadan ka ogayn qoraaga Sucuudiga
aadan21 / January 18, 2015
iftineducation.com – Shan waxyabood oo aanad ka ogayn Shabuugaynta qoraaga Internetka ee Sucuudiga ah.
Haddaba Su,aashu waxaa ay tahay. Waa kuma ninka lagu xukumay in ka badan 1000 Jeedal oo loo qaybiyey labaatan usbuuc. Jimcihii 9-ka Januray 2015, ayaa 50 jeedal oo ugu horeeyay lagu dhuftay.
Waxay ahayd in Jimce walba lagu karbaasho 50 jeedal, lakiin Jimcahan wuu ka badbaaday jeedalka, sida ay sheegtay hay’adda xuquuqda aadanaha ee Amnesty International, arrimo cafimaad awgood.
Waa ku ma Raif Badawi?
• Raif Badawi waa, 3i jir Sacuudiya oo ah qoraa wax ku qora bartiisa internetka, sanadii 2008 waxa uu sameeyay bartiisa internetka oo lagu falanqeeyo arrimaha Sacuudiga siyaasadda iyo diintaba, isagoo dhaliilay Wadaadada Sacuudiga • Sannadii 2012 waxaa lagu xiray magaalada Jidda, iyadoo lagu eedeeyay inuu wax ka sheegay, Culimada iyo askarta diinta ee Sucuudiga • Sanadoii 2013 waxaa la xukumay Badawi, waxaanu ka qaatay racfaan, maxkamaddii rafcaankuna waxay kusii siyaadisay xariga • Jimcihii 9 January, waxaa lagu karbaashay meel fagaare ah 50 jeedal ayaa lala dhacay, waxaana u haray 19 usbuuc oo mid walba 50 lala dhacayo Waa maxay danbigiisu? • Qoraallada bartiisa internku, waxay aad u dhaliili jireen haya’adaha diinta ee Sucuudiga, taas oo keentay in laysku dayo in la dilo 2012, kadib arrinkaasi ayaa xaaskiisa iyo caruurtiisuba Canada qaxoontino u galeen. • Arrintani waxay timid kadib markii uu Fatwa ka soo saaray Sheekh Abdulrahman Al Barak, taas oo uu sheegay inuu yahay gaal, waxaanu sheekhu ka cawday inuu Badawi yidhi ‘’ Muslimka, Gaalada,Yuhuuda iyo kuwa bilaa diinta ahiba waa siman yihiin’’
• Badawi waxaa si rasmi ah loogu eedeeyay ”cayda Islaamka isagoo adeegsanaya saxaafada electrooniga ah” iyo ” inuu ka baxay xadkii adeecidda ”. • Sanadii 2008-na waxaa lagu eedeyey in uu ‘Ridoobay’ taas oo aad ku mutaysan karto Dil, lakiin markii dambe waa laga daayay eedayntaasi.
Xukunka lagu riday miyuu Adagyahay ?
• Haddaba Badawi markii hore maxakamad ku taal Jidda ayaa waxay ku xukuntay lix boqol oo jeedal iyo toddobo sanno oo xarig ah, lakiin waxaa xukunkan kor usii qaaday maxakamadda racfaanka oo u badashay 1000 jeedal iyo 10 sanno oo xarig ah. • Meel fagaare ah, ayaa lagu fulinayay karbaashka iyadoo ul lala dhacayo Jimce walba muddo 20 usbuuc ah • Profesoor Madawi Al Rashiid oo ka tirsan London School of Economics ayaa sheegtay inuu xukunakani yahay xukun xad dhaaf ah, oo aan Islaamka hore usoo marin • Waxay tiri Profeesar Madawi “..arrinkani waxa ay tahay mid ku tacaluqda jawiga siyaasadeed ee Sucuudiga iyo halganka iyo dagaalaka lagula jiro Daacish, iyadoo kooxaha ku adag diintuna ay ka caroodeen arrinkaasi, Karbaashayadan ayaa ah qaar iyaga lagu raali galinayo. Labada usbuuc ee ugu horeeyey Januray 2015 waxaa meelo fagaara ah lagu dilay 9 qof. • Zaid Belbaagi oo ah khabiir dawladaha bariga dhexe kala taliya arrimaha cilaaqaadka iyo xiriirka daweynaha ayaa isagu sheegay in ciqaabtani ay waafaqsan tahay shuruucda Sacuudiga ee ku qotoma shareecada • Dad badan oo fikirkooda ku cabiray baraha bulshada internetka ee Sucuudiga ayaa taageeray ciqaabtan la mariyey Badawi.
Caalamku muxuu ka yiri arrinkani ?
• Dhowr dawladood oo reer galbeed ah, ayaa si toos ah u cambareeyey Xukunka lagu riday Badawi (Canada , USA, Germany ,Norway). • Dawladda Canada waxay si toos ah u dalbatay in la saamaxo Badawi, warsaxafadeed uu soo saaray Wasiirka Arrimaha Dibada ee Canada waxauu ku yiri ‘ciqaabtani waxay xadgudub ku tahay xoryatul qawlkiisa iyo sharaftiisa dadnimo ‘ • Xaaska Badawi, oo Ensaf Haider, ayaa iyadu ku baaqday in dawladda Canada ay si toos ah u codsato sii deyntiisa waxaanay tiri ” ma rabo in ay Warsaxafadeedyo cambareeyn ah uun soo saaraan. Dawladda Canada waxaan rabaa inay dalbato sii deyntiisa ” • BBC Newsnight, ayaa sheegay in dhibaato badani haysato reer galbeedka waayo ma cambarayn karaan Sacuudiga oo ay lacag badan kaga iibiyaan hub. Sucuudigu waa dalka afraad adduunka ee miisanayadda ciidamada sida ku cad warbixnta (2013) soo baxday, lacagtaas baaxadda leh waxay u soo xarootaa reer galbeedka, Yurub iyo Maraykanka.
Intaa dabadeed maxaa dhacaya haddaba ?
• Karbashkii Jimcihii hore dib loo dhigay kadib sababo cafimaad • Xaaskiisa Ensaf Haider, ayaa sheegtay in arrinka ninkeeda ku adag yahay caqli ahaan iyo jir ahaanba . • Ali Alahmad oo ah aqoonyahan ka faloodaa siyaasada Sacuudiga oo ka tirsana Maxadka siyaasada arrimaha Khalaiijka ayaa sheegay dhaawaca karbaashka iyo xanaaneynta jeelasha oo liidataa ay horseedaan dhimasho. • Laakiin Zaid Belbagi oo ah la taliyaha dawldaha bariga dhexe, ayaa sheegay in Sacuudiga iyo reer galbeedku saaxiib yihiin markaa arrinka Dibloomasiyad qarsoon lagu dhameeyn doono taas oo loogu doodayo Badawi
Wadaad Gaal ku Tilmaamay Rag caan ka ah Soomaaliya -Daawo
Ansixinta golaha wasiirada oo dib loo dhigay